2014-09-28 ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
Present Simple Tense (ရိုးရိုးပစ္စုပ္ပန်ကာလ) နှင့် Present Continuous Tense (ပစ္စုပ္ပုန်ဆက်လက်ကာလ) အသုံးပြုပုံ
My name's Alan. I work in an office, but I'm not sitting at my desk this week. I'm doingaLeadership Course for new managers.
At the moment we're buildingabridge, because we need to crossariver. We're all working hard, but I think it's great. I certainly prefer this to the office.
It's nine o'clock in the evening and Alan doesn't feel very happy now. He usually watches TV in the evening, but he isn't watching TV today. He's putting upatent.
I don't think this. It's raining and I feel cold, wet, and hungry. Perhaps I don't want to beamanager after all.
*Present Simple Tense (ရိုးရိုးပစ္စုပ္ပန်ကာလ) ကို ----
1. ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြလိုသောအခါ
He usually watches TV in the evening.
2. အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယေဘုယျ ဖြစ်ပျက်နေသောအကြောင်းအအရာကို ဖော်ပြလိုသောအခါ
3. အောက်ပါ စကားလုံးများနှင့် တွဲသုံးလေ့ရှိသည်။
usually, often, always, everyday, on Saturdays
I always get up early morning.
I usually read any kinds of historical books.
Everyday she goes to school.
* Present Continuous Tense (ပစ္စုပ္ပုန်ဆက်လက်ကာလ) ကို ------
1. ယာယီဖြစ်ပျက်နေသောအကြောင်းအရာ၊ အခြေအနေများကိုဖော်ပြလိုသောအခါ
He isn't wearingasuit today.
We're doingaleadership course this week.
2. စကားပြောနေသောအချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသောအခါ
She's talking on her mobile at the moment.
I'm not using the Internet now.
3. အနာဂတ်ကာလ၌ arrangements ကိုဖော်ပြလိုသေအခါ
We're meeting for dinner on Friday.
4. အောက်ပါစကားလုံးတို့ဖြင့် တွဲသုံးသောအခါ
now, at the moment, today, this week
Now I'm readingabook by U San Tha Aung.
They're going to Mrau-U for pilgrimage this week.
Describing States (Stative Verbs) ဟုခေါ်သော
"need, want, think, believe, know, like, prefer, love" ကြိယာတို့နှင့် Present Continuous Tense နှင့် တွဲသုံးလေ့မရှိပေ။ I'm needing, I'm wanting စသည်ဖြင့် မသုံးရဟုမှတ်ပါ။
Make sentences. Put the verbs into the correct tense.
1. He / usually / work/ indoors. This week/ he/ work/ outdoors.
2. At the moment/ I/ cook/ameal. I/ normally/ not cook/ anything.
3. He/ usually/ not walk/alot. H/ walk/ 10 kilometers today.
4. It's5a.m./ Alan/ get up/ now. He/ normally/ get up/ at 7.30.
5. I/ usually/ wear/asuit. This week/ I/ wear/ jeans.
1. A I____(go) to the show now. We____(need) some bread.
B Oh, I _______(think) the shop _________(close) at four on Sundays.
2. A The Director _________(want) to talk to Katrin, but I ________(not know) where she is.
B I ________(believe) she _______(have) lunch at the moment. She usually _____(go) for lunch at 1.30.
3. A I _______ (make)acup of coffee now. _______(you/ want) one?
B No, thanks, I _______(not like) coffee. I _______(prefer) tea.
____ Tom Hutchinson ရေးတဲ့ English for Life, Intermediate Student's Book စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
English Grammar, Intermediate Level, Present Continuous, Present Simple, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ, အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ
8:21 PM | No Comments |
And - နှင့်၊ ၍
As well as - သကဲ့သို့၊ လည်းဘဲ
And …. to - သကဲ့သို့၊ လဲဘဲ
And … also - သကဲ့သို့၊ လဲဘဲ
Not only…but also - သာမဟုတ်၊ လဲဘဲ
No less than - သကဲသို့၊ လဲဘဲ
Both..and - နှင့်၊ နှစ်ခုစလုံး
Not only…but - သာမဟုတ်၊ လဲဘဲ
Either … or - နှစ်ခုမှ တစ်ခု
Neither …. nor - နှစ်ခုလုံးမဟုတ်
Or - သို့မဟုတ်
Else - သို့မဟုတ်
Nor - တစ်ခုမှ မဟုတ်
But - သို့ရာတွင်၊ ဒါပေမယ့်
Yet - သို့ရာတွင်၊ ဒါပေမယ့်
So - ဒါကြောင့်
For - အတွက်ကြောင့်၊ သောကြောင့်၊ အကြောင်းမူကား
And so - လည်းပဲ၊ အဲဒီလိုပဲ။
And … too - လည်းပဲ။
And …neither - နှစ်ခုလုံး မဟုတ်။
And …eighter - ထိုနည်းအတူ၊ နှစ်ခုလုံး။
Coordinating Conjunction, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
Active Voice to Passive Voice အတွက် ကြိုတင် သိထားသင့်သော အချက်များ
7:53 PM | No Comments |
Adverb of Manner ပါသော (ly - ဆုံးသော) ဝါကျကို Active Voice မှ Passive Voice သို့ပြောင်းရာတွင် Adverb of Manner (ly - ဆုံးသော Adverb) ကို Passive Voice ဝါကျ၌ များသောအားဖြင့် V3 ၏ရှေ့တွင်ထားပေးရသည်။ (Adverb အသုံးပြုပုံကို Adverb အသုံးပြုပုံကဏ္ဍ၌ ဆောင်ပုဒ်နှင့်တကွ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါ။)
Ø I study English happily. (A V) >>> English is happily studied (by me). (P V)
Active Voice ဝါကျတို့တွင် Subject သည် ‘No one, No body, None’ တို့ ဖြစ်ပါက Passive Voice ပြောင်းသောအခါ not ကိုပေးရသည်။ (Negative Sentence ပြောင်းပေးရသည်။)
Ø No one likes death. (A V ) >>> Death is not liked. ( P V)
Ø No body knows when we will pass away. ( A V) >>> When we will pass away is not known. ( P V)
>>> It is not known when we will pass away. (P V)
Active Voice ဝါကျတွင် Subject သည် They, We, People, Someone, Everyone, Somebody, Everybody တို့ဖြစ်က Passive Voice ပြောင်းသောအခါတွင် by them, by us စသည်ဖြင့် ပြန်မထည့်ဘဲ ချန်ထားနိုင်သော်လည်း Noun (aboy, Su Su, etc. ) ပုဒ်များဖြစ်က byaboy, by Su Su စသည်ဖြင့် ပြန်ထည့်ပေးရသည်။ ( I, You, He, She, It) တို့ဖြစ်က Passive Voice ပြောင်းရာတွင် by me, by you စသည်ဖြင့် ပြန်ထည့်လို့ ရသလို ပြန်မထည့်ဘဲလည်း ထားနိုင်သည်။
Ø I play games with Mrat Thar Htun. (A V ) >>> Games are played with Mrat Thar Htun (by me). (P V)
Ø Su Su is reading the books. ( A V ) >>> The books are read by Su Su. ( P V )
Object နှစ်ခုပါသော (Direct Object & Indirect Object ) Active Voice ဝါကျကို Passive Voice သို့ပြောင်းသောအခါ သက်ရှိဖြစ်သောအခါ Indirect Object ကို Subject နေရာ (ရှေ့ဆုံး) သို့ ပြောင်းပေးပါက ပိုကောင်းသည်။
A. I give San Htwealovely present. ( A V)
ID. O D.O
B. I givealovely present to San Htwe. (A V)
D.O ID. O
A. San Htwe is givenalovely present by me. ( P V) or
A lovely present is given to San Htwe by me. ( P V)
B. A lovely present is given to San Htwe by me. ( P V) or
San Htwe is givenalovely present by me. ( P V )
Active / Passive Voice, Basic Level, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ, အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ
Three Kinds of Subject (အကြောင်းအရာ - ၃ မျိုး) နှင့် Kinds of Object (ကံပုဒ်အမျိုးအစား)
Three Kinds of Subject (အကြောင်းအရာ - ၃ မျိုး)
1. ပြုလုပ်တဲ့ Subject
Ø I write the letter. ငါဟာ စာရေးတယ်။
2. ပြုလည်းမပြုလုပ် ခံလည်းမခံရတဲ့ Subject (ရှိကြောင်း၊ ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြ)
Ø The letter is on the table. စာဟာ စားပွဲပေါ်တွင်ရှိသည်။
3. ခံရတဲ့ Subject (Passive Voice)
Ø The Letter is written (by me). စာဟာ ငါ့ရဲ့ရေးခြင်းကိုခံရတယ်။
Kinds of Object (ကံပုဒ်အမျိုးအစား)
(a) Object of the Verb - ကြိယာ၏ကံပုဒ်
Ø I writealetter. ငါစာတစ်စောင်ကိုရေးတယ်။
(b) Object of Preposition - ဝိဘတ်၏ကံပုဒ်
Ø Don’t you sit on the chair? မင်းကုလားထိုင်ပေါ်မှာ မထိုင်ဘူးလား။
(c) Direct Object - တိုက်ရိုက်ကံပုဒ်
Ø San Hwe gave meabook. စန်းထွေးက ငါ့ကို စာအုပ်တစ်အုပ်ပေးတယ်။
Ø The carpenter built meahouse. လက်သမားက အိမ်တစ်ဆောင်ကို ငါ့အတွက် ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။
(d) Indirect Object - တစ်ဆင့်ခံကံပုဒ်
Ø San Htwe gaveabook to me. စန်းထွေးက စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ငါ့အတွက်ပေးတယ်။
Ø The carpenter builtahouse for me. လက်သမားက အိမ်တစ်ဆောင်ကို ငါ့အတွက် ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။
Note: Personal Noun or Pronoun တို့ကို Indirect Object (ID.O) ဟုခေါ်ပြီး၊ Impersonal Pronoun or Noun တို့ကို Direct Object (D.O) ဟုခေါ်သည်။ (ID.O) ကို Transitive Verb အနားမှာကပ်ထားပြီး၊ (D.O) ကို နောက်ဆုံးမှာထား၍ ရေးသားသောအခါ To/For တို့ကိုထည့်စရာမလို။ (D.O) ကို Transitive Verb အနားမှာကပ်ထားပြီး၊ (ID.O) ကို နောက်ဆုံးမှာထား၍ ရေးသားလျှင်ကား To/For ကို (ID.O) ကြားနှင့် (D.O) ကြားတွင်ထည့်ပေးရသည်။
S + V + D.O + for/to + ID.O S + V + ID.O + D.O
The carpenter builtahouse for me. The carpenter built meahouse.
San Htwe gaveabook to me. San Hwe gave meabook.
Direct/ Indirect Objective, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ, အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ
7:38 PM | No Comments |
= are not/ am not
= dare not
= had not
= he had/ would
= he is/ has
= here is
= how is/ has
= I had/ would
= I will/ shall
= it is/ has
= might not
= need not
= ought not
= shall not
= she had/ would
= she is/ has
= that is/ has
= there had/ would
= there will
= there is/ has
= they had/ would
= we had/ would
= we will/ shall
= we are/ were
= what will
= what is/ has
= when is / has
= where is/ has
= who would/ had
= who will
= who is/ has
You had/ would
= you are/ were
Common Short Forms, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
စေဆုံးသော Verbs (ကြိယာများ)
7:37 PM | No Comments |
Wound - ဒဏ်ရာရာရစေသည်
Injure - ဒဏ်ရာရစေသည် (မတော်တဆ)
Interest - စိတ်ဝင်စားစေသည်
Delight - ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်စေသည်
Tire - မောပန်းစေသည်
Frighten - ကြောက်လန့်စေသည်
Astonish - အံ့သြစေသည်
Annoy - စိတ်အနှောင့အယှက်ဖြစ်စေသည်
Disappoint - စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်စေသည်
Please - ဝမ်းသာအားရဖြစစေသည်
Satisfy - စိတ်ကျေနပ်စေသည်
Excite - စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်
Surprise - အံ့သြသင့်စေသည်
Shock - အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေသည်
Rid - ကင်းလွတ်စေသည်
Hurt - ထိခိုက်နာကျင်စေသည်
Console - နှစ်သိမ့်စေသည်
Recover - ပြန်၍ရယူစေသည်
Stop - ရပ်တန့်စေသည်
Spend - အချိန်ကုန်လွန်စေသည်
Affect - ထိခိုက်ပျက်ပြားစေသည်
Ashame - အရှက်ရစေသည်
Cause - ဖြစ်စေသည်
“စေ”ဆုံးသောကြိယာများ, Verbs, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ
Thanking someone - ကျေးဇူးတင်စကား ပြောဆိုခြင်း
အသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ၁၅၀၀ ( A-Z)
Two Kinds of Noun - နာမ် (၂) မျိုး
Five Kinds of Noun - နာမ် (၅) မျိုး
How to Use Noun and Articles နာမ်ပုဒ်နှင့် နာမ်ညွှ...
ဘာသာပြန်အပိုင်းအစများ (၁) ရုရှားစစ်လေယာဉ်များအား စ...
How to Change Singular Nouns to Plural Nouns - နာမ...
Pronouns - နာမ်စား စကားလုံးများ
EIGHT PRONOUNS (နာမ်စား - ၈ လုံး)
The Usage of ‘Possessive Case’ - ပိုင်ဆိုင်မှုပြသဏ္ဍာ...
Seven Kinds of Adjective - နာမဝိသေသန (၇) မျိုး
Special Verbs with Adjectives - နာမဝိသေသနနှင့်တွဲသ...
ADJECTIVE ကို အစီအစဉ်တကျထားပုံ
Comparing Adjective (နာမဝိသေသနပုဒ်များကို နှိုင်းယှ...
Prepositions - ဝိဘတ်များ
အသုံးများသော PREPOSITION (ဝိဘတ်) ဆောင်ပုဒ်များ
Eight Types of Adverbs - ကြိယာဝိသေသန (၈) မျိုး
Formation of Adverb from Adjective - နာမဝိသေသနမှြ...
COMMON ADVERBS’ MOTTOES - အသုံးများသော ကြိယာဝ...
COMPARISON OF ADVERBS - ကြိယာဝိသေသနပုဒ်များကို နှို...
Common Verbs to Study by Heart = အလွတ်ကျက်မှတ်ရန်အ...
Verbs (ကြိယာများ)ကို ‘s, es’ စသည်ပေါင်းထည့်ပြီး ‘S...
Three Kinds of Subject (အကြောင်းအရာ - ၃ မျိုး) နှင...
Active Voice to Passive Voice အတွက် ကြိုတင် သိထားသ...
Present Simple Tense (ရိုးရိုးပစ္စုပ္ပန်ကာလ) နှင့် P...